Ny looks ao ...
2011-12-27 @ 14:39 in Andavanandro
Efa ela no nikasako hanoratana ity lohahevitra iray ity fa izao vao tadidiko. Tsy fantatro na misy na tsia ny sampana mpanara-maso ireny sakafo omena ny olona ireny eto Antananarivo fa hitantara izay nahazo ahy aho. Efa ho herintaona no sambany nidirako tamin'ny looks teo amin'ny toerana iray be mpandeha izay fa dia tsy nisy nitovizana tamin'izay efa nihinanako teny amin'ny toeran-kafa fa tsy tadidiko loatra.
Noho ny fiarahan'ny namana vitsivitsy no mba idirana amin'izy ireny. Rehefa tazanina hatrety ivelany moa ny laoka isan-karazany amin'ireny toerana ireny dia mampilendalenda antsika Malagasy, ny an'ny vahiny tsy fantatro izay fahatsapany, ka raha tsy misy mpitarika tsy nankeny fa nieritreritra manko aho hoe tahaka ny lafo ihany ny tolotra avy amin'izy ireo. Mba heverina ho manana ny lazany ihany koa moa ireny looks (avy amin'ny teny hoe loha-kisoa) ka izay no anoratana izay tsy mety ka mila avoatra.
Dia nihinana ny tena, fa rehefa afaka fotoana fohy taorian'ny nahalaniana ny sakafo dia nanomboka nisalebolebo te-handoa izany amin'izay aho. Ny namana moa niteny hoe sao dia nisy sakafo tsy zaka. Izaho anefa tahaka ny mba tsy mifidy hanina loatra ankoatra ny gisa (na gana) angaha, izany hoe rehefa tena mavesatra vao ho tsy zakako. Avy eo moa dia tahaka ny noana dia noana indray, ka nahatsapana hoe tena be karibonetra izany ny sakafo ao. Resaka tsipalotra vao teo no nahafantarako fa tsy any amin'ny laoka no nasiana izany karibonetra izany fa ao amin'ny vary. Moa ve tsy tahaka ny manapoizina ihany ry zareo ary mamono ny varotra ataony raha fenoina karibonetra io sakafo io?
Nanoratra aho noho fahafantarana fa mba mila fivoaran'ny toe-tsaina indrindra indrindra ny zavatra tahaka izany. Maro ihany manko ny Malagasy no mitondra vahiny eny ka ho henatra raha "tsy mahalevon-kanina" ny olona entina eny, na hoe tsy nahazo fahafaham-po araka izay tokony ho izy. Mahazo mitory ry zareo raha diso izay lazaiko , nefa averiko indray fa zavatra nihatra tamiko no soratako... fa ny fanatsarana no tena tadiaviko, sady asa raha ho tsapan'izy ireo fa hampitombo ny olona ho eny aminy raha tsy asiana ireny zavatra tsy dia mahasoa ny mpihinana ireny ny sakafo atolotr'izy ireo.
Nanoratra aho ka tsy ny looks amin'ny ankapobeny no lazaiko eto fa ao amin'ny toerana iray be mpandeha. Nesorina ny anarana fa mampifamaly...